▷Tsy maintsy atao ve ny manambara ny mari-panambadiana rehefa manao sonia antoka? | Fampahafantarana IZAO【2022】
Tsy maintsy manao fanambarana ara-panambadiana ve rehefa manao sonia antoka?
Mandainga momba ny toe-panambadiana amin'ny fangatahana fampindramam-bola
1 Mandainga momba ny toe-panambadiana amin'ny fangatahana fampindramam-bola
1.1 Tsy ara-dalàna ve ny mandainga momba ny fanambadiana?
1.2 Fepetra momba ny sonia fanambadiana araka ny fanjakana 2021
1.3 Mila didy fisaraham-panambadiana ve ny orinasa titre?
Ny iray amin'ireo fanoloran-tena lehibe indrindra azontsika atao dia ny manaiky fifandraisana matotra sy maharitra, na amin'ny olon-kafa na, amin'ny raharaha ara-bola, miaraka amin'ny trano amidy any San Francisco, CA, na any Boulder, CO, ary ny fampindramam-bola 30 taona miaraka aminy. Ary, mahaliana, misy fifandraisana eo amin'ny vola sy ny fanambadiana, indrindra rehefa mifandray amin'ny fandoavana ny antoka amin'ny tranonao io vola io. Mety hisy fiatraikany mivantana amin'ny fahafahanao mahazo antoka ny sata mifehy ny fifandraisanao, na mpitovo ianao, na ao anatin'ny fifandraisana maharitra, na manambady.
Tsy hoe sata mifandray manokana no manapa-kevitra raha afaka mahazo antoka ianao. Saingy io sata io dia mety hisy fiantraikany amin'ny antony ara-bola raisin'ny mpampindram-bola amin'ny famaritana raha hankatoavina ny fampindramam-bola anao. “Tsy hafa ny fijerinay ny mpanjifa; Heverintsika ho zava-misy izy ireo, ”hoy i Chris Copley, talen'ny fampindramam-bola ao amin'ny Citizens Bank, Greater Philadelphia Area. “Afaka manana mpiara-mindram-bola ianao, ary tsara izany. Raha miantso ianao ary milaza fa mpitovo ianao dia tsy misy zavatra mitranga. Izahay dia mijery ny fampindramam-bola mifototra amin'ny tena izy sy ny fidiram-bolanao ary izay tadiavinao hovidiana."
Tsy ara-dalàna ve ny mandainga momba ny fanambadiana?
Inona no atao hoe zon'ny trano? Nahoana aho no tsy maintsy misoratra anarana ny zon'ny tranoko? Ahoana no ahafantarako raha tompon'ny trano ny vadiko? Ahoana raha manana ny trano miaraka amin'olon-kafa ny vadiko? Ahoana no ahafahako manoratra tsara ny fananako? Afaka manoratra ny fananako amin'ny trano mihoatra ny iray ve aho? Tranom-pianakaviana Ary ahoana ny amin'ny trano hafa? Afaka mamindra ny zon'ny fananako ve aho? Famindrana ny zon'ny fanananao voasoratra amin'ny trano vaovao Mila ny faneken'ny vadiko ve aho mba hanoratana ny fananako marina? Ho fantatry ny vadiko ve fa nanoratra ny fananako aho? Rahoviana no tapitra ny zon'ny fananana? Fanitarana ny zon'ny fananana Fanafoanana ny zon'ny fananan-tany Ahoana raha miaraka isika tompon'ny trano?
Raha manambady ianao dia manan-jo hipetraka ao an-tokantranonao, na dia amin’ny anaran’ny vadinao ihany aza. Izany dia fantatra amin'ny hoe zo hanana trano fonenana. Ao amin'ity torolàlana ity dia hahita fampahalalana bebe kokoa momba ny zo hanana trano fonenana sy ny fomba fisoratana anarana ianao.
Ao amin'ity torolàlana ity dia miresaka momba ny mpivady sy ny fanambadiana isika, saingy mitovy ny lalàna ho an'ny mpivady tsy mpivady. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fiaraha-miasa an-trano dia jereo ny torolalana momba ny fananganana fiaraha-miasa an-trano. Amin'ity torolalana ity dia hiantso ny vadinao, ny vadinao, na ny mpiara-miasa aminao izahay ho vadinao.
Fepetra momba ny sonia fanambadiana araka ny fanjakana 2021
Miaraka amin'ny singa manan-danja vitsivitsy, ny fananana rehetra azo nandritra ny fanambadiana dia heverina ho fananan'ny fiaraha-monina. Ny fananana ara-panambadiana mazàna dia ahitana zavatra toy ny trano, fiara, fanaka, kojakoja, tahiry, fatorana, firavaka, kaonty any amin'ny banky, fisotroan-dronono, drafitry ny fisotroan-dronono, ary kaonty manokana. Ny fananana ara-panambadiana amin'ny ankapobeny dia tsy ahitana ny sandan'ny mari-pahaizana matihanina/licence.
Ny fananana rehetra azo nandritra ny fanambadiana dia fananam-piarahamonina, na iza na iza nandoa izany. Ny maningana amin'ity fitsipika ankapobeny ity dia ny fananana azon'ny iray amin'ireo mpivady ho fanomezana, lova avy amin'ny olon-kafa, na tsy tafiditra amin'ny fifanarahana manan-kery. Araka ny voalaza etsy ambony, ireo fananana ireo dia heverina ho fananana tsy ara-panambadiana. Ny fananana ara-panambadiana dia mety ahitana trano, kaonty any amin'ny banky, tahiry, fanaka, fisotroan-dronono sy fisotroan-dronono, fiara ary fananana manokana hafa.
Ny fananana tsy mpivady dia izay fananana azo alohan'ny fanambadiana. Mijanona ho fananan’ny antoko nanana azy talohan’ny fanambadiana. Ny fananana tsy manam-panambadiana dia mijanona ho tsy manam-panambadiana raha mbola tsy nomena na nomena ny vadiny hafa.
Mila didy fisaraham-panambadiana ve ny orinasa titre?
Na te hanala ny vadinao amin'ny fampindramam-bola ianao noho ny antony manokana na te hividy ny tranonao manokana ianao, dia misy tombony amin'ny fikatsahana trano ho mpividy irery. Miankina amin'ny toe-javatra misy anao manokana, ny fananana vady tokana amin'ny fampindramam-bola dia mety ho safidy tsara indrindra.
Ny fananan-tany dia antontan-taratasy manamarina hoe iza no tompon-trano ara-dalàna. Mety hisy fiantraikany amin'ny firafitry ny fampindramam-bola ihany koa izany. Ny tsara indrindra dia ny miresaka amin'ny mpisolovava sy ny mpampindram-bola mba hahafantarana ny safidy ho an'izay tokony ho voatanisa ao amin'ny lohateny sy ny antoka.
Azonao atao ny manaisotra ny anaran'ny vadinao amin'ny anaram-boninahitra raha: - Misaraka amin'ny volanao ianao ary maniry ny hanohy izany - Te hiaro ny fanananao amin'ny vadinao tsy misy trosa ianao - Te hifehy tanteraka ny famindrana fananana ny ho avy (ohatra, raha manan-janaka avy amin'ny fanambadiana taloha ianao)
Ny quitclaim deed dia ahafahanao mamindra ny fananana fananana avy amin'ny olona iray mankany amin'ny iray hafa. Raha manapa-kevitra ny hamela ny anaran'ny vadinao tsy ho eo amin'ny anaram-boninahitra ianao, dia azonao atao foana ny mampiasa taratasy fialan-tsasatra mba hamindrana ny fananana feno amin'ny fananana azy.
Tsy maintsy atao ve ny manambara ny antoka?
Tsy maintsy atao ve ny fiantohana aina rehefa manao sonia antoka?
Tsy maintsy manao sonia antoka ve ny mpiantoka?
Miaraka amin'ny hofan-tranoko dia mandoa ny fampindramam-bola tsy maintsy manambara ve aho?
Nantsoina hijoro vavolombelona teo anatrehan’ny mpitsara ny naman’i Esther López fa…
Nanokana vola 50 tapitrisa i Alicante hanavaozana ny polisy any an-toerana,…
Ny mpiambina sivily ao Albacete dia mitazona olona iray izay…
Tovolahy iray niditra tao amin’ny zandarimariam-pirenena andro vitsivitsy taorian’ny…
Sokajy fametrahana antoka Ticket navigation
Tsy maintsy atao ve ny maka fiantohana tsy mandoa vola amin'ny fampindramam-bola?
Inona no fampindramam-bola azoko idirana raha mahazo 1715 euros aho?
Alternatives amin'ny Rojadirecta
Lisitra Wiseplay nohavaozina tsara indrindra 2020
Sokajy Safidio ny sokajy Fitaovana solosaina ambain-dain'ny fandaharany safidy kilalao miendrika biriky BLOG penina Tariby, Adaptatera ary tady Compas & mpitondra ary kianja Kaonty sy fiarovana ara-bola Fanaraha-maso fidirana Zavatra any amin'ny birao Notebooks Rubio kahie sy kahie Ny mpandrava FAMPIANARANA Masinina mamatotra Tranga Tags Fampirantiana, fampirantiana ary fitoeran'entana olo-malaza fametrahana antoka -jaza Lalao lalao LEGAL boky Boky Anaya asa-tanana Maps mpanamarika Fitaovana 2 taona Fitaovana 3 taona Fitaovana 4 taona Fitaovana 5 taona Fitaovana 6 taona Fitaovana any amin'ny birao Latabatra birao Backpacks fanaka Girls ankizy About us mpikarakara taratasy Parcels sy karatra fandraharahana Adhesives sy kasety adhesive Sata momba ny takelaka sy ny baoritra TANIMANGA Pensilihazo mekanika sy pensilihazo Puzzle Masinina fanamarihana sy marika Marker sy Rollers Seza birao Uncategorized Valopy sy kitapo karinen-tseky TV